Apple emebeghị ya, mana anyị na-atụ aro ịcha ọbara ọbara maka MacBook gị | Esi m mac
Apple emebeghị ya, mana anyị na-atụ aro ịcha ọbara ọbara maka MacBook gị
Anyi na emecha ubochi site n’itinye uzo ohuru n’ichedo ya bu na anyi choro inye mmetu nke Apple nyekwara taa. iPhone 7 na 7 gbakwunyere na (PRODUCT) RED. N'isiokwu a anyị na-amam a set nke ngwa na ị ga-enwe ike iji na gị macbook mere na ọ na-acha uhie uhie ma dakọtara ọhụrụ gị iPhone (PRODUCT) RED ma ọ bụrụ na ị na-ama zubere ịzụta ya.
Na agba iPhone ọhụrụ a ga-abụ nnukwu ihe ịga nke ọma na-abụ kama mana ruo mgbe ọnụ ọgụgụ ahịa ga-amalite ịmata na anyị enweghị ike ikwenye ya n'ụzọ dị egwu. Nke ọ bụla, ị nwere ike chọọ ịnweta Macbook gị na agba ọbara na nke ahụ bụ njedebe nke edemede a.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo anyị jikọtara, anyị na-atụ aro ngwa ngwa ngwa 4-in-1 nke gụnyere mkpuchi mkpuchi, okwu siri ike maka ahụ MacBook, ihe nchekwa keyboard na nchekwa ihuenyo. N'ihe banyere atọ n'ime ha, ha na-acha na nke ahụ Apple chọrọ ime uhie ọzọkwa ejiji n'oge a.
Ezubere ngwa a maka ndị ugbu a 13-anụ ọhịa MacBook ma ị nwere ike nweta ya na ọnụahịa nke euro 25,44 na njikọ na-esonụ. Ọ bụrụ na ngwaahịa a adọtawo uche gị, egbula oge ileta njikọ ahụ anyị nyere ma tinye usoro gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ mkpuchi mkpuchi maka ụdị ndị ọzọ, anyị na-agba gị ume ị gaa na njikọ a ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple emebeghị ya, mana anyị na-atụ aro ịcha ọbara ọbara maka MacBook gị
A na-emelite iTunes na-eruwanye mbipute 12.6 na akụkọ ndị a
Nke a bụ otu katalọgụ ngwaahịa RED si dị na okike Apple